02/09/2021 - ALANZAYAR
“ကိုဗစ်မာယာကျော့ကွင်းထဲကို ၀င်သွားတဲ့ မိဘနှစ်ပါး ကို စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့ ရှင်မွေလ”
“ကိုဗစ်မာယာကျော့ကွင်းထဲကို ၀င်သွားတဲ့ မိဘနှစ်ပါး ကို စိတ်ပူခဲ့ရတဲ့ ရှင်မွေလ” MRTV-4 မင်းသားချော ရှင်မွေလ ဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အမြဲ ပြုံးရယ်နေတတ်တဲ့ ပရိတ်သတ်အချစ်တော် မင်းသားတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ စပ်ဖြဲဖြဲနေတတ်တဲ့ ပုံစံလေးကလည်း မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်အချစ်တော်ရှင်မွေလဟာ သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာ မိဘ […]
NUG က တိုက်ပွဲခေါ်သံကြေညာတာနဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့ ပဲခူးတိုင်း PDF (ရုပ်သံ)
NUG က တိုက်ပွဲခေါ်သံကြေညာတာနဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲမယ်ဆိုတဲ့ ပဲခူးတိုင်း PDF (ရုပ်သံ) အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က တိုက်ပွဲခေါ်သံပေးတာနဲ့ မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေ ဆင်နွှဲဖို့ လူငယ်တွေကို စစ်သင်တန်းတွေပေးပြီး ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDFက ပြောဆိုပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်း PDF ဟာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ […]
ပုံစံအမျိုးမျိုးကို အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့ လက်ရာမြောက်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးမီဒီယာများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သူ
ပုံစံအမျိုးမျိုးကို အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့ လက်ရာမြောက်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီးမီဒီယာများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သူ Facebook ပေါ်က CCTVNews မှာ စိတ်အားထက်သန်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံနဲ့ အကြောင်းအရာကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ၎င်းအကြောင်းအရာက ၁၅နှစ်အရွယ် Nong Ma Daew အမည်ရှိ ထိုင်းဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ဦးဟာ single mom Ladyboy […]
ရဟန်းဘောင်ကိုဝင်သွားပေမဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့ဖခင်ကို နေ့တိုင်းဆွမ်းခံကျွေးနေတဲ့ ကိုရင်လေး
ရဟန်းဘောင်ကိုဝင်သွားပေမဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့ဖခင်ကို နေ့တိုင်းဆွမ်းခံကျွေးနေတဲ့ ကိုရင်လေး ထောင်ကျနေတဲ့ ဖခင်ကို နေ့တိုင်း ဆွမ်းခံရှာကျွေးတဲ့ ကိုရင်လေးရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်မြင်ကွင်း … မိခင်နို့ဖိုးဆိုတာ ဆပ်လို့မကုန်လို့ ဆိုကြသလို ဖခင်ချွေးဖိုးဆိုတာလည်း ဆပ်လို့ မနိုင်ပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်လေးကတော့ အသက်ငယ်ရွယ်သူဖြစ်ပေမဲ့ မိမိရဲ့ ဖခင်အပေါ်မှာ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့သားဖြစ်သူ ကိုရင်လေးရဲ့ ချီးကျူးလေးစားစရာဖြစ်ရပ်လေးပါပဲ….ကြေကွဲဖို့လည်း ကောင်းလှပါတယ်။ […]
မှန်ကန်လို့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ပျူစောထီးခေါင်းဆောင် ယုန်လေးရဲ့ လက်နက်ကိစ္စ
မှန်ကန်လို့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ပျူစောထီးခေါင်းဆောင် ယုန်လေးရဲ့ လက်နက်ကိစ္စ အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ လက်နက်တွေကိစ္စပြောထားတဲ့ အဆိုတောင်ယုန်လေးအသံဖိုင်ပေါက်ကြား ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို မှန်ကန်လို့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ပျူစောထီးခေါင်းဆောင် ယုန်လေးရဲ့ လက်နက်ကိစ္စ အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ လက်နက်တွေကိစ္စပြောထားတဲ့ အဆိုတောင်ယုန်လေးအသံဖိုင်ပေါက်ကြား ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို မှန်ကန်လို့နာမည်ကျော်ကြားလာတဲ့ ပျူစောထီးခေါင်းဆောင် ယုန်လေးရဲ့ လက်နက်ကိစ္စ အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အား ဖော်ပြထားသည်။ လက်နက်တွေကိစ္စပြောထားတဲ့ […]
မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မျက်ကြည်လွှာနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး
မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မျက်ကြည်လွှာနဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်ရတနာစိုးကတော့ The Voice Myanmar အစီစဉ်မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုကို ရရှိခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ ခင်ရတနာစိုးက ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့မှာတော့ လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ အလှူလေးတစ်ခုကို မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ လာမယ့် စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့မှာတော့ ပရိတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ခင်ရတနာစိုးရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်ကျရောက်တဲ့ […]
လူမှုကွန်ရက်တွင် လူကြည့်များနေသော မြန်မာ့ရိုးရာ ဦးရွှေရိုး အကကို ကပြနေတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား(ဗီဒီယိုဖိုင်)
လူမှုကွန်ရက်တွင် လူကြည့်များနေသော မြန်မာ့ရိုးရာ ဦးရွှေရိုး အကကို ကပြနေတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသား(ဗီဒီယိုဖိုင်) ယခု ကပြထားတဲ့ ဦးရွှေရိုးအက လေးဟာ ဆိုရင်လည်း အရမ်းကောင်ပါးတယ် လေးစားပါတယ် လူမျိူးခြား ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည် ကိုချစ်တဲ့. အနောက်တိုင်းသားတစ်ပါးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်… မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ကိုမြတ်နိုးပြီး ဦးရွှေရိုးအက. ကောင်းတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအိုလီဗီယာကော်တွန်းနဲ့ […]
ပွဲကြမ်းပြီဟေ့ အောက်တွင်ရုပ်သံဖိုင်အားဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု အမြန်ဆုံးကူးပြောင်းနိုင်ရေး တရုပ်နှင့်လက်တွဲသွားမည်ဟုပြောကြား…. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်ရေးရရန် တရုတ်အစိုးရကတိုက်တွန်း… ပုသိမ်မြို့စိုက်ပျိုးရေးရုံးရှေ့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွား… ဥရောပသမဂ္ဂအရေးယူပိတ်ဆို့မှုချိုးဖောက်ပြီး အီတလီမှမြန်မာသို့ တရားမဝင်သစ်များ ဝယ်ယူ….. အပြည့်အစုံအားအောက်ကဗွီဒီယိုဖိ်ုင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ခရက်ဒစ်ဗွီဒီယို ပှဲကွမျးပွီဟေ့ အောကျတှငျရုပျသံဖိုငျအားဖျောပွထားသညျ။ မွနျမာပွညျတှငျးမှာ ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးမှု အမွနျဆုံးကူးပွောငျးနိုငျရေး တရုပျနှငျ့လကျတှဲသှားမညျဟုပွောကွား…. ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ […]
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အဘွားအိုကြီးတစ်ယောက်လို မွေးဖွားလာတဲ့ ရက်သားအရွယ်ကလေးလေး
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အဘွားအိုကြီးတစ်ယောက်လို မွေးဖွားလာတဲ့ ရက်သားအရွယ်ကလေးလေး အမည်မဖော်လိုတဲ့ South African မိန်းကလေးတစ်ဦးဟာ ​ပြီးခဲ့​တဲ့ Augest လ ၃၀ ရက်နေ့က Libode မှာရှိတဲ့ သူမရဲ့နေအိမ်မှာပဲ ထူးဆန်းတဲ့ရောဂါနဲ့ ကလေးငယ်လေးတစ်ဦးကို မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိပြီ​ဖြစ်တဲ့ မိခင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူမမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကလေးလေးရဲ့ […]
ချောမောလှပသည့် သူဋ္ဌေးမတစ်ဦးလို ဟန်ဆောင်ပြီး လိုင်းပေါ်တွင် ရည်းစားထားကာ ပိုက်ဆံလိမ်လည်ခဲ့သည့် ကောင်မလေးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့
ချောမောလှပသည့် သူဋ္ဌေးမတစ်ဦးလို ဟန်ဆောင်ပြီး လိုင်းပေါ်တွင် ရည်းစားထားကာ ပိုက်ဆံလိမ်လည်ခဲ့သည့် ကောင်မလေးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ အချို့လူများသည် ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို လွယ်လွယ်အသုံးချကာ ငွေကြေးများကိုလိမ်လည်ပြီး ဘဝကို အလွယ်တကူဖြတ်သန်းလိုကြပေသည်။ယခုတွင်လည်းဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Bac Giangတွင်နေထိုင်သော La Thi Ngocဆိုသည့် အသက်၂၇နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးဟာ ငွေကြေးလိမ်လည်ခဲ့သည့်အတွက် ဟိုချီမင်းမြို့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ ကောင်မလေးဟာ လိုင်းပေါ်တွင် […]